» धुर्मुसलाइ ठूलो झड्का,”रेणु दाहाल लाई खुसी बनाउन,वृद्ध,बच्चा र कैदी सग पैसा उठाको आरोप “! (भिडियो सहित) धुर्मुसलाइ ठूलो झड्का,”रेणु दाहाल लाई खुसी बनाउन,वृद्ध,बच्चा र कैदी सग पैसा उठाको आरोप “! (भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
धुर्मुसलाइ ठूलो झड्का,”रेणु दाहाल लाई खुसी बनाउन,वृद्ध,बच्चा र कैदी सग पैसा उठाको आरोप “! (भिडियो सहित)
2021, April 3rd, Saturday
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको ड्रिम ,प्रोजेक्ट गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रगंशालाको यतिखेर ३० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
तर उक्त रगंशाला पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि भने आर्थिक समस्या पर्ने देखिएको छ ।जसकारण रगंशाला निर्माणमा आर्थिक सहयोग जुटाउन मेची-महाकाली अभियान थालिएको छ । यो अभियानका अभियान्ताहरू नेपालका प्रत्येक जिल्ला पुग्ने छन् भने त्यहाँ दुईदिन बिताएर, रगंशालाको बारेका जानकारी गराउने छन् ।
उक्त अभिनयानमा सीताराम कट्टेल (धुर्मुस), अर्जुन घिमिरे (पाँडे) , सामाजिक अभियान्ता अर्जुन भुषाल लगायतका व्यक्तिहरू रहेन छन् ।उक्त टोलीलाई, सोमबार बिहान रगंशालाकै मजदुरहरूले टीका र माला लगाई चार हजार चारसय पाँच रुपैयाँ सहयोग गरेर बिदाई गरेका छन् ।
धुर्मुसको यही अभियानलाई लिएर तारा बारालले त्यहाँ रङशाला बनाउनु हाम्रो देशको लागी हित छैन भनेर बोल्दै आएकी छिन । हेरौ उनको बिचार भिडियोमा